Niclosamide Cas 50-65-7 Qiimaha, Iibiyaha Bolise
[Foomka Molecular] C13H8Cl2N2O4
[Miisaanka Molecular] 327.12
[Muuqaal] Budada huruud khafiifka ah
Ku saabsan Nicosamide
Niclosamide waa daawada antihelmintic oo leh anthelmintic iyo firfircoonida antineoplastic, oo loo isticmaalo in lagu daweeyo caabuqyada dulin ee malaayiin qof oo adduunka ah. Si kastaba ha ahaatee cilmi-baadhisyo dhowaan la sameeyay ayaa muujiyay in niclosamide laga yaabo inay leedahay codsiyo caafimaad oo ballaadhan oo loogu talagalay daaweynta cudurrada aan ahayn kuwa ay sababaan dulin.
Niclosamide waxay aad waxtar ugu leedahay ka hortagga gooryaannada xiidmaha ee kala duwan, laakiin kama soo horjeeda cestodes unugyada, sida echinococcosis ama cysticercosis.
Waxa laga yaabaa inay caawiso daawaynta caabuqyada sida gooryaanka lo'da, gooryaanka dwarf, iyo caabuqyada tapeworm ballaaran, iyo sidoo kale noocyada kale ee gooryaanka. Dawadan waxtar uma yeelan doonto dhammaan noocyada caabuqa dulinnada, sida gooryaanka ama pinworms. Niclosamide waa anthelmintic-ka dila gooryaanka isla marka uu taabto.